जुनकिरी | Nagarik News - Nepal Republic Media
हिमाली बाजा, पहाडी गीत, तराई नाचमा,नेपाली देख्छौँ नेपाल भेट्छौँ, नेपाली माटोमा । पूर्वको मेची, पश्चिम काली, नेपाली सिमाना, चन्द्र र सूर्य, भएको झन्डा, नेपाली निसाना ।
नागरिक ४ कार्तिक २०७७ मंगलबार १ मिनेट पाठ
त्यो बेला सिसाकलमको चलन याद भएन । सिलोटमा खरीले अक्षर लेखेर कहिलेकाहीँ बुबाले पढाएको याद छ । त्यो बेला हामी प्राय निलो कलमले लेख्थ्यौं । कसैकसैले रातो कलम ल्याउँदा त्यसको शान नै अर्को हुन्थ्यो । मेरो पनि रातो कलम आउने भयो भनेर म मक्ख थिएँ । बुबाले कलम ल्याइदिनुभयो । बाहिरको कलमको आवरण रातो थियो । तर लेखेर हेर्दा निलो सरयो । मेरो अनुहार कलमको सराईजस्तै निलो भयो । खूबै रिस उठ्यो । रातो कलम भनेको त निलो पो ल्याइदिनुभएछ भनेर रोएँ ।
नागरिक २ कार्तिक २०७७ आइतबार ५ मिनेट पाठ
सन्ध्याको अनौठो यात्रा
उनका साथीहरूले उनलाई राम्रो व्यवहार गरिरहेका थिए । नयाँनयाँ मीठामीठा खानेकुरा र नयाँ रमणीय ठाउँले उनलाई आनन्दित बनाएको थियो । सन्ध्या हामी बसेको ठाउँ पृथ्वी लोकभन्दा अर्कै ठाउँमा गएकी थिइन् । उनका साथीहरूले उनलाई पृथ्वीका मानिसले आफैंले आफ्नै कारणले नयाँनयाँ रोग निम्ताएको बताएका थिए । उनीहरूले त्यही कारणले अहिले पृथ्वीका मानिसले दुःख पाइरहेको भने ।
नागरिक ३० आश्विन २०७७ शुक्रबार ३ मिनेट पाठ
अहिले किताब किनेर ल्याएर दियो बालक विद्यालय जान्छ आउँछ कति के पढेर आयो पढेन केही वास्ता छैन । कस्ता साथीभाइहरूसँग खेलिरहेको छ । त्यो पनि थाहा छैन । बाबाआमा दुवै जागिरे आफ्नै चटारो भियाईनभियाई छ । बालबच्चालाई हेर्ने समय नै छैन । गृहकार्य गरेर बुझायो कि बुझाएन त्यो पनि थाहा छैन । कतिलाई त विद्यालय गयो गएन त्यो पनि थाहा हुँदैन ।
नागरिक २९ आश्विन २०७७ बिहीबार ६ मिनेट पाठ
नानीहरू, भविष्यमा मजस्तै फूल बन जन्मिएपछि आखिरमा सबै मर्नुपर्छ मजस्तै फुलेर संसारबाट झर्नुपर्छ सबैको आँखामा फूलजस्तो बन्नलाई बाँचुञ्जेल धर्तीमा राम्रो काम गर्नुपर्छ ।
कति राम्रो शरद ऋतु लाग्छन् घाम न्याना पुतलीले पनि फेर्छिन् रङ्गीविरङ्गी नाना सुकिला छन् गाउँपाखा सफा घरका छाना फुलबारीमा फूल फुल्छन् चरी गाउँछन् गाना ।
लागू गरौँ बालअधिकार
आज साना भोलि ठूला देशका कर्णधार, सबले बुझी लागू गरौँ बालअधिकार । अघि बढ्छौँ सधैँ हामी, सबको पाए साथ बालअधिकार लागू गर्न, मिलाउँ हातमा हात । लागू गरौँ बालअधिकार, अनि खुशी बनौँ उन्नति र प्रगतिका, बाटाहरू खनौँ । खोस्न हुन्न बालअधिकार, सुनिश्चित गरौँ लागू गर्न यसलाई हामी सबै अघि सरौँ ।
बालबालिका र बालसाहित्य
बालबालिकाहरुलाई बाल्यकालदेखि नै साहित्यप्रति अभिरुचि जगाउन आवश्यक छ । घर, परिवार, समाज, सरकार, शिक्षक, अभिभावकहरूको सहयोगले नै साहित्यकारहरूको आत्मबल बढाउँछ । पढ्नु पर्नेले नै पढ्दैनन् भने लेखेर मात्र के काम भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । बालसाहित्यकारले पनि बालबालिकालाई कौतुहल जगाउने, कल्पनाशील बनाउने खालका सरल भाषामा साहित्य सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।
नागरिक १८ आश्विन २०७७ आइतबार ७ मिनेट पाठ
एकदिन स्कुलबाट फर्कँदा पेटीको कुनामा एउटा कालो रङको सानो छाउरो जाडो र भोकले कराइरहेको उनले देखिन् । उनलाई त्यसको माया लाग्यो । साथीहरूले ‘हिँड्, त्यस्लाई त्यसै छोडी देऊ’ भन्दा पनि उनले त्यसो गर्न सकिनन् ।
अचम्मलाग्दो पैसाको कथा
तर, मेरो खुसी धेरै बेरसम्म रहेन । मेरो हातमा पैसा देखेर बुवाले खोस्नुभएको थियो अनि बुवाले मलाई गाली गर्नुभएको थियो – अहिलेदेखि पैसाको लतमा लागिस् भने पछि गरिखालास् तोर्मे ! मलाई मात्र होइन आमालाई पनि बुवाले रिसाएर गाली गर्नुभएको थियो – यो चिचिलालाई पैसा दिएर बिगार्ने भइस् ।
नागरिक २ आश्विन २०७७ शुक्रबार ३ मिनेट पाठ
बाआमातिर हेरेर मुसुुक्क हाँस्दै उसले भन्यो, “अहिले त म आधुनिक तरीकाले जुत्ता बनाउन जान्ने भएर आएको छु । आवश्यक सामान पनि ल्याएको छु । अब यही गाउँमा बसेर उद्योग खोल्ने र व्यापार गर्ने विचार गरेको छु । आजसम्म बालाई सबैले काले सार्की भनेर हेपे । अब उद्योगको मालिक बनाउँछु ।”
नागरिक २ आश्विन २०७७ शुक्रबार ५ मिनेट पाठ
मेरा आँखा अगाडि बाबुआमाले, आफन्तले र परिवेशले बालबालिका कुटिरहेका दृश्यहरू आइरहेका छन् । ठूला मान्छेसँग मुख लाग्ने भन्दै गाली गर्ने, हप्काउने र कुट्ने पनि साधारण सभ्यताभित्रै पर्छ नेपालमा । ठूला मान्छेले गरेको अन्याय सहन बाध्य पारिएका परिवेशहरू आँखामा आइरहेका छन् । यसले बालबालिकामा अन्याय पनि सहने बानीको विकास भइरहेको हुन्छ । बालबालिकाको सिर्जनात्मक पक्ष कमजोर हुँदै जान्छ । यसरी बालबालिकाको सिर्जनात्मक क्षमतालाई कुल्चिने कुटाइ, हप्काइ र कथित सभ्यताका खुट्किलाहरू कतिकति छन् नेपालमा!
नागरिक ३० भाद्र २०७७ मंगलबार ४ मिनेट पाठ
मेरो १० वर्षको अनुभवमा बालमैत्री स्थानीय शासन र बाल क्लब
बालमैत्री नगररगाउँ बनाउनु भनेको सबै बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो । सुरक्षित, जन्म, खोप तथा स्याहार पाउने उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नु नै बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनु हो । हाम्रा बालबालिकाहरू हेला, अपमान, दुव्र्यवहार , श्रमशोषण, बालविवाह, बेचविखन, लागु औषध, बालसैन्य आदि क्षेत्रबाट मुक्त बनाउने अभियान बालमैत्री अभियान हो ।
नागरिक ३० भाद्र २०७७ मंगलबार ७ मिनेट पाठ
नारी प्रधानमन्त्री,राष्ट्रपति, वैज्ञानिक,सगरमाथा बिजेता सब भएका छन्। उनीहरुसंग अथाह क्षमता हुन्छ। नारी श्रृष्टि संचालक पनि हो। हामीले नारीलाई उचित वातावरण दिनु पर्छ र उनीहरुको शक्ति उजागर गर्न सहयोग गर्नु पर्छ।मैले हाम्रो संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नारीको हक,हित र उत्थानको लागि अनवरत काम गरेको छु र गरिरहने छु।
नागरिक २८ भाद्र २०७७ आइतबार १ मिनेट पाठ
अपूरै छन् संविधानमा बालअधिकारका ठेली, सहारा पाउने आशमा बेचिन्छन् यहाँ कैयौं चेली फोहोर बटुल्न नपरोस् है आँसु चुहाउँदै कति हिँड्छौं शाषक बनी निमुखाको मन रुवाउँदै। मैदानमा आएपछि जितहार, स्वीकार्छौँ जन्मसिद्ध अधिकार नपाउँदा धिक्कार्छौँ सबैको भलो होस् भन्ने मेरो चाहना ढिल छाडेर नबसौँ है मेरो शुभकामना ।